मोदीको फोटोमा ‘द लाई लामा’ लेखेर गल्ली-गल्लीमा टासिए पोस्टर, कसले गर्‍यो यस्तो काम ? — Imandarmedia.com
मोदीको फोटोमा ‘द लाई लामा’ लेखेर गल्ली-गल्लीमा टासिए पोस्टर, कसले गर्‍यो यस्तो काम ?
नेपालको २ दिने भ्रमणमा रहेका भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको भ्रमण र उनले नेपाल सरकारसँग गरेका ब्यापार सम्झौताको जति प्रचारप्रसार र हल्लाखल्ला भएको छ । त्यति नै हल्लाखल्ला उनको विरोधमा भएका गतिबिको पनि भएको छ ।
मोदी नेपाल भ्रमणमा आउने तयारी भएपछि २०७२ सालको नाकाबन्दीलाई सम्झिदै नेपाली नागरिकले सामाजिक सञ्जालमा जसरी बिरोध गरेका छन् त्यसै गरि उनकै देशका नागरिकले पनि आफ्नै शैलीमा उनको बिरोध गर्न थालेका छन् ।
उनि यतिबेला नेपाल भ्रमणमा छन् तर उनकै देशको राजधानी नयाँ दिल्लीमा उनलाई ‘द लाई लामा’ भन्दै गल्ली गल्लीमा पोस्टर टाँसेर बिरोध जनाइएको छ । मोदी नेपालको भ्रमणमा रहेका बेला उता दिल्लीमा यसरी बिरोध गरिनुलाई अर्थपूर्ण रुपमा लिइएको छ ।
निर्वासित तिब्बती धार्मिक नेता दलाई लामासँग मिल्दोजुल्दो गरी मोदीको पोस्टरमा ‘द लाई लामा’ नाम राखिए पनि तिब्बती नेता लामासँग मोदीको तस्वीरसहितको पोस्टरको सम्बन्ध छैन । मोदीलाई ‘द लाई लामा’ भनेर पोस्टरमा लेखिनुको अर्थ बेग्लै छ ।
मोदीले बारम्बार झुट बोल्दै आएको भन्दै विरोधीहरुले उनलाई ‘झुठ बोल्ने नेता’ भन्दै आएका छन् । सोही अर्थमा उनलाई अंग्रेजी भाषामा नामाकरण गरी ‘द लाई’ भनिएको हो ।
प्रहरीले नयाँ दिल्लीका विभिन्न गल्लीबाट त्यस्ता पोस्टर निकालेको छ । पोस्टर कसले टाँसेको हो भन्ने प्रष्ट नभएको प्रहरीको भनाइ छ ।
पोस्टर कहाँ प्रकाशन भएको हो भन्ने पनि प्रष्ट भइसकेको छैन । प्रहरीले अज्ञात व्यक्तिहरुको नाममा उजुरी दायर गरी आवश्यक अनुसन्धान तथा कारवाही सुरु गरेको बताइएको छ । (एजेन्सी)